Darktable: A Photoflowflow Ngwá Ọrụ | Site na Linux
Na Ndepụta ngwa ngwa na ngwa maka Ubuntu / Linux anyị kwuru ihe dị ike dijitalụ foto workflow a na-akpọ Ọchịchịrị, kwuru na akụrụngwa emelitere na Disemba wee jupụta ọtụtụ atụmatụ ọhụụ, otu nke modul mkpochapu modul, nkwado maka sistemụ arụmọrụ ọhụrụ yana ntinye nke profaịlụ mmemme akọwapụtara.
Ọchịchịrị bụ ngwa ọrụ na-enye anyị ohere ịrụ a workflow foto mere mfe, ebe ọ bụ na ọ na-enye anyị ohere nke jikwaa usoro niile nke ịde foto, site na ịhazi foto ahụ ka e bipụta ya na ndekọ a họọrọ.
1 Gịnị bụ Darktable?
2 Atụmatụ darktable
3 Olee otú wụnye Darktable?
Gịnị bụ Darktable?
Ọchịchịrị Ọ bụ ngwa nke nchịkọta ọrụ foto mepere emepeya na otu nnọọ kensinammuo interface na a pụtara nnukwu obodo, ngwá ọrụ ahụ nwere ihe eji arụ ọrụ ọkụ na arụmọrụ nke na-eme ka mmepe foto dị na ime ụlọ gbara ọchịchịrị.
Iji ngwá ọrụ a anyị nwere ike jikwaa ihe ndozi dijitalụ anyị na nchekwa data, nke nwere ike iji anya nke uche na arụmọrụ nke ime ụlọ na-enwu gbaa na ime ụlọ gbara ọchịchịrị, ihe a niile iji nwee ike rụọ ọrụ na ihe oyiyi ọkachamara iji meziwanye tonality ma rụpụta foto yana njikwa ọkụ zuru oke.
Darktable bu ezigbo uzo ozo LightroomNhazi ya na arụmọrụ ya na-enyere aka ịhazi ihe oyiyi na ịhazi faịlụ dị larịị na nsonaazụ ọkachamara, n'otu ụzọ ahụ, mbipụta emere na foto dijitalụ na-akwado akụkọ ntolite mgbanwe, yabụ ịlaghachi na steeti ndị gara aga dị mfe.
Ngwaọrụ arụmọrụ a dị ike maka Linux nwere modulu 61 na-enye gị ohere ịrụ ọrụ dị iche iche, nke anyị nwere ike ịkọwapụta:
Mbido anaghị ebibi N'ime oge a na - arụ ọrụ, anaghị agbanwe ihe oyiyi izizi.
Nkwado nkwado dị elu.
Daalụ nkwado OpenCL dị mma anyị nwere ike ịrụ nhazi ihe onyonyo a osooso site GPU.
Ngwá ọrụ dị mma maka nzacha na ịkọwapụta ihe oyiyi.
Nkwado maka ọtụtụ ụdị onyonyo dịka JPEG , CR2 , NEF , HDR , PFM , RAF n'etiti ndị ọzọ.
Njirimara iji jikwaa ụda nke foto (ọkwa, akụkụ, nchapụta na ọrụ nke ụda).
Nchịkwa agba (saturation, nhọrọ mgbanwe agba na njikwa profaịlụ agba).
Arụ ọrụ maka mgbazi onyonyo (blurring, nkọ, agakọ na wepụ stains).
Nkà nka (mmepụta mmiri, nhazi nkewa yana njupụta nwayọ nwayọ).
Olee otú wụnye Darktable?
Darktable bụ multiplatform (Linux, Mac na Windows), ọ nwekwara ngwugwu maka ihe kacha mkpa distros, ihe a tụrụ aro ka ị mee mgbe ị wụnye Darktable bụ ịga gị echichi ma wụnye ngwugwu kwesịrị ekwesị maka distro anyị ma soro usoro ndị otu Darktable kwadebere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Darktable: A Photoflowflow Ngwá Ọrụ
Edemede dị mma….